Elman oo Dhulka Ku Jiiday Kooxda Badbaado Daawo Sawirro - iftineducation.com
Elman oo Dhulka Ku Jiiday Kooxda Badbaado Daawo Sawirro
Elman VS Badbaado
iftineducation.com – Waxaa galabta furmay horyaalka 37 ee `wadankeena soomaaliya kaas oo ka furmay magalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ugu horeeyn waxaa lagu furay kooxda elman oo difacaneysa koobka iyo waliba kooxda kale ee Badbaaado.
Ciyaarta waxaa waxeey ka dhacday goornka jaamacadaha ee magalada muqdisho waxaan ciyaarta ka soo qeyb galay dad aad ufarabadan kuwaas oo ka kala yimid dagmooyinka muqdisho waxaan wajiyadooda laga dheehan karay farxada aad uweeyn.
Ugu horeeyn waxaa la baastay ciyaarta taas oo markiii hore umuqatay mid labada koox ay soo bandhigayeen ciyaar ay aad ula dhaceen dadkii tageerayasha ahaa ee labada koox.
Haafkii hore ee ciyaarta waxaa usuurta gashay naadiga elman in ay dhaliso gool aad u qurxoon kaas uu soo karoosay xidiga ay ku dhaarato elman ee abdicaziiz hoomey kadibna waxaa madaxa ku dhalshay Sacad.
Waxeey socotaba ciyaarta mar kale ayaa waxaa naadiga Elman ay dhalsheen gool kale kaas oo ahaa gool ku laad ama rigoore waxaana saxiixay laciibka saciid oo mar kale farxada galiyay tageerayaasha Elman.
Ciyaarta waxaa lagu kala nastay 2-0 oo ay ku hugamineysay naadiga Elman balse markii la isku soo laabtay ayaa waxaa ay la soo baxeen naadiga Badbaado ciyaar aad u wanagsan waxaana usuurta gashay in ay iska soo magaan hal gool Elman waxaa ku xumatay xaalada waayo la iskuma haleyn karo hal gool waayo waa lagaa soo aari karaa waqti danbe.
Si kastaba ciyaarta waxeey isku badashay mid xamaasad badan oo labad koox waxeey soo bandhigeen ciyaar aad uwacan balse rajadii ay ka qabtaya naadiga Badbaado in ay iska soo gudo goolka lagu leeyahay ayaa waxaa rajadaas ka dhigay cirbada ceel ku dhacday laacibka Elman ee lagu magacaabo sacad oo mar kale ka dhalshay gool labaad sidaas ayeey ku soo dhamatay kulankii dhexmaray labada koox ee kala ah Elman iyo Badbaado waxaan 3-1 ku soo badisay Elman oo ay sidaad ku raacday guusha.
Fanaaniinta Cusub oo Aanan Wadan Magacyada Waalidiintooda Iyo Noqo Fanaan Balse Magaceyga Hasheegan – Layaab”
Daawo Sawirada Arooska Ikraan Caraale iyo Saxardiid “